Real Madrid Oo Shaacisay Inay Caawa Soo Bandhigayso Tabababaraheeda Cusub, Julen Lopetegui | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Real Madrid Oo Shaacisay Inay Caawa Soo Bandhigayso Tabababaraheeda Cusub, Julen Lopetegui
(14-6-2018) Kooxda Real Madrid ayaa si rasmi ah u shaacisay in caawa fiidkii ay saxaafada u soo bandhigi doonto tababaraha ay khilaafka xoogan kaga dhex abuurtay xulka qaranka Spain ee Julen Lopetegui. Maamulka Real Madrid ayaa markale ku sigtay in ay nacayb badan ka helaan jamaahiirta Spain kadib markii ay isku waqti noqon gaadheen shirka jaraa’id ee Julen Lopetegui iyo Fernando Hierro oo xulka qaranka Spain loo magacaabay.
Tababaraha cusub ee xulka qaranka Spain ee Fernando Hierro ayaa marka ay saacada Spain tahay 6:00 galabnimo waxa uu qabanayaa shirkiisii jaraa’id ee ugu horeeyay laakiin Real Madrid ayaa hal saac dib uga dhigtay waqtigan si ay saxaafada ugu soo bandhigto Julen Lopetegui.
Sidaa daraadeed, waxay maamulka Real Madrid go’aansadeen in marka ay saacada Spain soo gaadho 7:00 fiidnimo ay saxaafada u soo bandhigaan macalinkooda cusub ee Julen Lopetegui kaas oo isna markii ugu horaysay shir jaraa’id qaban doona isaga oo tababaraha cusub ee Real Madrid ah.
Julen Lopetegui oo waji gabax kala kulmaya dadka dalkiisa ree Spain isla markaana ay u arkaan in uu noqday khiyaanoole dhuuni raac ah ayaa la filayaa in uu wax yaabo badan kaga hadli doono shirkiisa jaraa’id ee ugu horeeya ee bandhigiisa Bernabeu.
War saxaafadeed ay Real Madrid ku shaacisay in caafa fiidkii ay saxaafada u soo bandhigi doonto macalinkeeda cusub ayaa lagu yidhi: “Kooxda kubbada cagta Real Madrid waxay maanta saxaafada u soo abndhigi doontaa Julen Lopetegui ee ka tababaraha kooxda kowaad-Khamiista June 14. Wuxuuna 7:00 pm CEST ka dhici doonaa goobta madax waynaha ee Santiago Bernabéu presidential box”.
Julen Lopetegui ayaa markii ugu horaysay Florentino Perez iyo maamulka Real Madrid la kulmay isaga oo soo gaadhay caasimada Madrid kadib markii uu si murugo leh uga soo duulay Russia halkaas oo shaqada xulka qaranka Spain looga soo caydhiyay maalin ka hor inta aanu koobka aduunku bilaamin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa si wayn loo sugayaa shirka jaraa’id ee ugu horeeya ee Julen Lopetegui qaban doono iyo haddii uu si furan uga hadli doono qalalaasaha uu xulka qarankiisa Spain kaga abuuray in uu shaqada Madrid aqbalay in xili xaasaasi ah lagu dhawaaqo.